Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 8, 2020 12: 30 No Comments
Djehuty (-5 sano): (Waxaa loogu yeeri jiray Griiga "Thot ama Hermès") Djehuty waa saynisyahankii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee abid abtirsada, marka la ogolaado Gariigta. Waa la muujiyey, sababta oo ah milkilaha badbaado dhan ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 1, 2020 12: 30 No Comments
Haddii ay caqli yeelan karto. (Hayso sirahaaga gaar ahaan haddii ay ku saabsan tahay mashruucyada aad ku waddo.) Haddii intaas lagu daro, waxay si fiican u karsanaysaa, waxay leedahay sanduuq casaan jilicsan oo leh ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 25, 2020 12: 30 No Comments
Timaha si fiican ayey u kori karaan haddii aad talooyinkan soo raacdid: Timahaaga ula dhaqan sidii geedo oo kale. Ku shub biyo dabeyl wata maalin walba kuna buufi…	Akhri wax dheeraad ah
Intii lagu jiray duulaanka Faaris, Griiga iyo Roomaanka, tiro badan oo dadka Masar ah ayaa u qaxay maahan kaliya gudaha qaaradda, lamadegaanka iyo gobollada buuraleyda ah, laakiin sidoo kale, dhulalka deriska ah sida Arabia iyo Arabia Aasiya Yar
Haddii waxa aad ugu yeertay, Ciise uu yimid subaxnimadii berri subaxkee ayaad dooran doontaa, dadka Madowga / Afrikaanka ah? Dadkaygu waxay ka baxaan sawirradan khayaali ah kahor intaysan goor dambe dhicin, maxaa yeelay jilayaashan ayaa ah Hollywood oo keliya, jilayaasha filimada iyo cilmu-nafsiga ee rinjiyeyaasha
Asalka ereyga "Kimistaan" Waxaa jira labo tixgelin oo waaweyn oo muujinaya in ereyga "Kimistaan" uu ka yimid asal ahaan Afrika (laga soo bilaabo Masar):
Meelaha ugu caamsan ee ragga ah ee goobaha shukaansiga
Feb24 01: 45